Mampiharihary ny fankahalana sy ny herisetra atao amin’ny vehivavy ny fanafihana anaty fiarandalamby any Japana · Global Voices teny Malagasy
Mampiharihary ny fankahalana sy ny herisetra atao amin'ny vehivavy ny fanafihana anaty fiarandalamby any Japana
Nahoana no voasakana tsy hiaina feno amin'ny lafim-piainana rehetra ny vehivavy
Voadika ny 08 Septambra 2021 4:17 GMT
Mpandeha ao amin'ny garan'ny fiarandalamby any Tokyo. Tamin'ny 6 Aogositra 2021, lehilahy iray nanafika olona miisa 9 tao anaty fiarandalamby tany Tokyo. Sary avy amin'i Nevin Thompson, somary namboarina kely mba hiarovana ny fiainana manokana.
Fampahafantarana: Mitantara ny antsipiriany momba ny herisetra hikendrena ny vehivavy ity lahatsoratra ity.
Nanasongadina ny kolontsain'ny fankahalana vehivavy any Japana ny fanafihana tamin'ny antsy tao anaty fiarandalamby tany Tokyo tamin'ny volana Aogositra ka nahatonga ireo vehivavy sasany matahotra amin'ny fiarovana azy ireo manokana rehefa mivezivezy isan'andro.
Tamin'ny 6 Aogositra, lehilahy iray 36 taona no nosamborina ary voarohirohy tamina fikasana hamono olona rehefa voalaza fa nanafika ny mpandeha tamin'ny antsy tao anaty fiarandalamby teny amin'ny garan'ny lalamby Odakyu any Tokyo. Vehivavy miisa efatra sy lehilahy miisa dimy no naratra tamin'io fanafihana io, ary vehivavy iray no nentina tany amin'ny hopitaly fa naratra mafy.
Nilaza izy rehefa voasambotra fa ny fanaovana ireo vehivavy ho lasibatra no antony nanosika azy hanao izany fanafihana izany:
Nandritra izay enin-taona lasa izay, maha-te-hamono ny mahita vehivavy toa faly… Mety hahavita izany ny olon-drehetra.
Ny vehivavy any Japana dia matetika iharan'ny herisetra ara-nofo amin'ny fiainana andavanandro, toy ny rehefa mandray fitaterana. Taorian'ny fanafihana, maro ireo vehivavy tao amin'ny tambajotra sosialy no naneho ny tahotra momba ny fivezivezeny ao Tokyo sy any amin'ny faritra hafa any Japana.
Tamin'ny herintaona fotsiny aho dia nisy lehilahy nitsapatsapa ahy tao anaty fiarandalamby, lehilahy maro no nanatona hametaveta ahy teny an-dalana, maro no manaraka ahy tany anaty gara sy teny an'arabe, nisy lehilahy nanakasokasoka ny maha-lehilahy azy tamiko tao anaty fiarandalambe feno olona. Tantara nandritra ny 14 taona, tsy ampy ny litera hitantarako azy.
Nitatitra ny Fampahalalam-baovao isankarazany, ao anatin'izany ny masoivohom-baovao Kyodo sy ny Japan Times fa ilay nolazaina ho mpanafika dia “diso fanantenana” fa nilaozan'ny vehivavy teo aloha. Ny andro taorian'ny fanafihana no niseho ny porofo maro hafa fa efa nihevitra na nikasa ny hanao fanafihana bebe kokoa talohan'ny nisamborana azy ilay voarohirohy.
Ity ilay lehilahy notadiavin'ny fanehoan-kevitra sasany antsika hialana tsiny.
Niantso ny fanafihana ho toy ny “heloka bevava amin'ny fankahalana vehivavy” (ミ ソ ジ ニ ー 犯罪), sy toy ny “heloka fankahalana vehivavy” ny mpitsikeran'ny fampitam-baovao sasany fa tsy niresaka momba ny tsy fahaizan'ilay olona voarohirohy mifandray aman'olona.
Nanasokajy ny fanafihana ho (fikasana) “famonoana vehivavy (olona)” i Ito Kazuko, mpisolovava sady sekretera jeneralin'ny Human Rights Now any Japana ankehitriny raha nanoratra ho an'ny Yahoo! Japan News.
Na dia ho mazava aza ny antsipiriany misimisy kokoa, raha heverina araka ny nitaterana azy ny fanamarihana avy amin'ilay voarohirohy dia ahiana tokoa fa heloka fankahalana vehivavy sy [fikasana] hamonoana vehivavy no niseho. Mitombo ny tahotry ny vehivavy.
“Ny hitovian'ireo mpitifitra olona faobe, ​​mpamono olona tsirairay hatrany, sy ireo andian'olon-dratsy mpanao herisetra amin'ny vehivavy dia ny fankahalana tanteraka vehivavy,” hoy i Julia DeCook tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Global Voices. Profesora mpanampy ao amin'ny Sekolin'ny Serasera ao amin'ny Oniversite Loyola Chicago i DeCook ary anisan'ny ifantohan'ny fikarohana ataony ny vondrona mpankahala an-tserasera, sy ny firazanana sy momba ny lahy sy ny vavy, indrindra ny fahambonian'ny lehilahy sy ny toetran-dehilahy.
“Tsy mihevitra aho fa ohatra iray amin'ny fihetsika ekstremista elatra farany havanana atao amin'ny vehivavy [ny fanafihana tao anaty fiarandalamby tany Tokyo], fa ohatra mampihorikoditra mampiseho kosa ny herisetra sy ny famonoana noho ny fankahalana vehivavy sy ny valifaty hamelezana ny feminisma sy ny zon'ny vehivavy,” hoy i DeCook. “Ny fankahalana vehivavy amin'ny fomba mahery setra izay ikendrena ireo vehivavy amin'ny fiainana andavanandro sy isan'andro no ohatra iray amin'ny fomba hampiharan'ny fanjakan-dehilahy ny fifehezana ara-politika amin'ny alàlan'ireny tetikady fampitahorana sy fampihorohoroana (matetika manokana) ireny.”
Mazàna manana laza tsara amin'ny fahatsapan'ny olona manokana ho voaaro i Japana, manana 73 isanjaton'ny olona namaly tamin'ny fanadihadiana vao haingana fa mahatsapa ho milamina tsara izy ireo rehefa mandeha irery amin'ny alina.
Na izany aza, nanontany momba ity fanasokajiana ity i Sayaka Chatani, mpahay tantara :
Heveriko fa resaka fotsiny ihany ny hoe “firenena milamina” i Japana. Isan'andro ny vehivavy ao amin'ny fiarahamonintsika dia tsy maintsy miaina ao anaty tahotra amin'ny fitsapatsapana, fanorisorenana ara-nofo ary ny fandrahonana ny hovonoina. Iza marina moa izany no milaza fa “milamina i Japana?”
Tamin'ny tatitra nataon'ny governemanta Japoney tamin'ny taona 2019, 65 isanjaton'ny vehivavy no namaly fa niharan'ny fitsapatsapana, fikasikasihana, ary karazana fanararaotana ara-nofo mitovy amin'izany, izay matetika iainana any anaty fiarandalamby misesika olona.
Raha ny tombatombana sasany, maherin'ny 95 isanjaton'ny trangana herisetra ara-nofo ao Japana no tsy voatatitra any amin'ny polisy. Ny tatitra iray nataon'ny governemanta Japoney tamin'ny taona 2019 no nahitana fa mbola mitohy ny tsy fanaovana tatitra momba ny heloka bevava amin'ny fanararaotana ara-nofo any Japana, fa eo amin'ny 14 isanjaton'ireo vehivavy tratry ny fanaovana herisetra ara-nofo ihany no mitory izany any amin'ny polisy.
Araka ny antontanisa navoakan'ny Sampan-draharahan'ny Politika Nasionaly Japoney tamin'ny 2021, dia nitombo ny isan'ny tatitra momba ny heloka bevava avy amin'ny fanavakavahana lahy sy vavy, toy ny fandrahonana famonoana sy ny herisetra an-tokantrano, tany Japana tao anatin'ny roapolo taona lasa. Nitranga izany fitomboan'ny tatitra momba ny heloka bevava izany hatramin'ny nahalany ny lalàna manohitra ny fandrahonana famonoana tamin'ny taona 1999, sy ny herisetra an-tokatrano tamin'ny taona 2001.
Ohatra, nisy fitarainana miisa 2 280 momba ny fandrahonana famonoana tamin'ny taona 2000, raha oharina tamin'ny taona 2020 izay 20 189. Tamin'ny taona 2017 no nahitana betsaka indrindra tamin'ireo fitarainana ireo izay nisy tranga notaterina miisa 23.079. Tamin'ny taona 2000, miisa 3.608 ny isan'ny fitarainana ofisialy momba ny herisetra an-tokantrano tany amin'ny polisy tao Japana, raha oharina tamin'ny taona 2020 izay 82.643 ny isan'ny fitarainana ofisialy ary efa ho 120.000 ny isan'ny antso vonjy an-tariby momba ny herisetra an-tokantrano.
Tsy mbola misy tatitra tamin'ny fomba ofisialy avy amin'ny Sampan-draharahan'ny Polisim-pirenena momba ny karazana herisetra atao amin'ny vehivavy. Hatramin'ny taona 2021, tsy mbola misy lalàna manameloka ny firaisana tsy nifanarahana (mifanohitra amin'izany, ny “firaisana ara-nofo an-tery” sy ny fandikan-dalàna mitovy amin'izany dia tsy azo heverina ho heloka raha tsy misy ny herisetra na ny fandrahonana araka ny lalànan'ny heloka bevava Japoney.”)
Ary tsy ny vehivavy rehetra ihany koa no hitatitra ny zavatra niainany any amin'ny polisy.
“Any Japana, mazàna tsy mitory ny vehivavy iharan'ny fanararaotana, ary malaza ratsy ny polisy fa tsy dia manampy amin'ny karazana tranga toy ireny,” hoy i DeCook.
Tsy an'i Japana irery ihany io, fa zavatra iainan'ireo vehivavy manerantany, araka ny filazan'i DeCook.
“Hitantsika izany amin'ny trangana fanolanana sy ny herisetra an-tokantrano izay mampihomehy fa sazy fohy no omena ny nahavanon-doza, mandoa onitra fotsiny, na mbola avela hitana fitaovam-piadiana na basy na dia aorian'ny fiampangana azy tamin'ny herisetra an-tokantrano sy ara-nofo aza,” hoy izy. “Ny lojika sy ny fampihorohoroana avy amin'ny fankahalana vehivavy no miteraka ireo rehetra ireo. Manakantsakana ny vehivavy tsy hiaina tanteraka sy handray anjara amin'ny lafim-piainana rehetra ny fitambaran'ireo zavatra rehetra ireo.”